Matio 1 | MBC Bible | YouVersion
I. NY NAHATERAHAN’I JESOA SY NY FAHAZAZANY
Ireo razam-ben’i Jesoa
(Jereo Lk 3,23-38)
1Filazana ny razan’i Jesoa-Kristy, Zanak’i Davida, zanak’i Abrahama:
2i Abrahama niteraka an’i Isaaka;
i Isaaka niteraka an’i Jakôba;
i Jakôba niteraka an’i Jodà mirahalahy avy;
3i Jodà niteraka an’i Faresa sy i Zarà tamin’i Tamara;
i Faresa niteraka an’i Esrôna;
i Esrôna niteraka an’i Arama;
4i Arama niteraka an’i Aminadaba;
i Aminadaba niteraka an’i Naasôna;
i Naasôna niteraka an’i Salmôna;
5i Salmôna niteraka an’i Booza tamin’i Rahaba;
i Booza niteraka an’i Obeda tamin’i Rota;
i Obeda niteraka an’i Jese;
i Jese niteraka an’i Davida mpanjaka.
6I Davida mpanjaka niteraka an’i Salômôna tamin’ilay vadin’i Oria;
7i Salômôna niteraka an’i Rôbôama;
i Rôbôama niteraka an’i Abiasa;
i Abiasa niteraka an’i Asà;
8i Asà niteraka an’i Jôsafata;
i Jôsafata niteraka an’i Jôrama;
i Jôrama niteraka an’i Oziasa;
9i Oziasa niteraka an’i Joatama;
i Joatama niteraka an’i Akaza;
i Akaza niteraka an’i Ezekiasa;
10i Ezekiasa niteraka an’i Manase;
i Manase niteraka an’i Amôna;
i Amôna niteraka an’i Josiasa;
11i Josiasa niteraka an’i Jekôniasa mirahalahy avy,
tamin’ny andro nifindrana tany Babilôna.
12Ary rehefa nifindra tany Babilôna,
i Jekôniasa niteraka an’i Salatiela;
i Salatiela niteraka an’i Zôrôbabela;
13i Zôrôbabela niteraka an’i Abioda;
i Abioda niteraka an’i Eliakima;
i Eliakima niteraka an’i Azôra;
14i Azôra niteraka an’i Sadôka;
i Sadôka niteraka an’i Akima;
i Akima niteraka an’i Elioda;
15i Elioda niteraka an’i Eleazara;
i Eleazara niteraka an’i Matàna;
i Matàna niteraka an’i Jakôba;
16ary i Jakôba niteraka an’i Josefa vadin’i Maria#1,16 Vadin’i Maria. Araka ny fanaon’ny Jody, dia ny razan’ny lahy ihany no lazaina. Fa mpihavana akaiky i Josefa sy i Maria ka tsy maintsy miray razana. Vadin’i Maria izay niteraka. I Josefa tsy voalaza ho niteraka, satria i Maria irery no niteraka an’i Jesoa.
izay niteraka an’i Jesoa ilay atao hoe Kristy.
17Koa ny taranaka rehetra hatramin’i Abrahama ka hatramin’i Davida, dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’i Davida ka hatramin’ny nifindrana tany Babilôna, dia taranaka efatra ambin’ny folo; ary hatramin’ny nifindrana tany Babilôna ka hatramin’i Kristy, dia taranaka efatra ambin’ny folo.
Rain’i Jesoa ara-panjakana i Josefa
18Ary toy izao no nahaterahan’i Kristy: i Maria reniny dia efa fofom-badin’i Josefa#1,18 Fofom-bady. Dia naman’ny vady mihitsy izany amin’ny Jody, fa mbola tsy nampakarina; nifamofo herintaona vao niray trano ny mpivady.; fa raha mbola tsy niray trano izy ireo, dia hita fa nanana anaka avy tamin’ny Fanahy Masina izy. 19Ary i Josefa vadiny, noho izy lehilahy marina sady tsy ta hanala baràka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. 20Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, indro nisy Anjelin’ny Tompo niseho taminy, tamin’ny nofy, ka nanao hoe: «Ry Josefa, zanak’i Davida, aza matahotra hampakatra an’i Maria vadinao, fa ny Zaza ao an-kibony dia avy amin’ny Fanahy Masina, 21ary hiteraka Zazalahy izy, ka ny anarany hataonao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.»
22Ary izany rehetra izany no tonga, dia mba hahatanteraka izay nampilazain’ny Tompo ny mpaminany hoe:
23 Indro ny Virjiny hitoe-jaza ka hiteraka Zazalahy, ary ny anarany hatao hoe Emanoela, izany hoe: «amintsika Andriamanitra.»
24Ary rehefa nahatsiaro tamin’ny torimaso i Josefa, dia nanao araka izay nandidian’ny Anjely azy ka nampakatra ny vadiny, 25ary tsy nahalala azy izy ambara-piterany#1,25 Ambara-piterany, ets. ary tatỳ aoriana koa; ny taloha fotsiny no lazain’ny hoe ambaraka, fa tsy lavina velively akory kosa ny tatỳ aoriana. ny Zanany lahimatoa, ary nataony hoe Jesoa no anarany.